/Blog/Ithala/Uyisebenzisa kanjani iRipbololone Recipe ukudibanisa iTrenbolone Enanthate Powder
ezaposwa ngomhla 05 / 21 / 2019 by 阿斯劳 bha liweyo Ithala.
I-Trenbolone E (i-Trenbolone enanthate) yenye yee-steroids ezinokuthi zihlelwe njengezongezo ezinamandla ezongeza kwimisipha. Nangona yayiqale isetyenziselwe ukukhula kwemisipha kwizilwanyana, ukufunwa kwayo phakathi kwabalimi bomzimba kuye kwanda kwiminyaka ngenxa yokusebenza kwayo ekukhuleni kwemisipha.
I-Tren E (i-Trenbolone enanthate) yeyona ndlela inde kakhulu eqinisekisiweyo ye-trenbolone kwaye inenqanaba lokuthatha ixesha elide. Ngenxa yoko, inqanaba lokukhutshwa komzimba licotha nalo. Inobomi obunesiqingatha seentsuku ezilishumi elinambini, obenza ukuba bube nexesha elincitshisiweyo. Isiqingatha sobomi obude, nangona kunjalo, sinegalelo kwinto ende ye-anabolic.
I-100mg / mL yeTrenbolone Enanthate iresiphi ye100mL
I-3mL kunye ne-20mL / 60ml isirinji ngenaliti eyi-18-21
-Step 3: Fudumeza i-beaker kwindawo yokuhlambela amanzi
Yongeza iBenzyl Benzoate (BB) kunye neBenzyl Alcohol (BA) kwaye uxhokonxe. I-Trenbolone eluhlaza iqala ukunyibilika kumgubo. Ukuba ufuna ukwandisa ukukhawuleza kwenkqubo, jonga inyathelo 3.
Nazi izibonelelo ezimbalwa zeTrenbolone Enanthate ezizisa kwitafile xa usithathile isigqibo sokuyisebenzisa.
Ngokungafaniyo nezinye i-steroids ezinobunzima bemisipha ngenxa yokugcina amanzi, i-Trenbolone Enanthate yokufumana ubunzima isiphumo sokukhula kwe-nitrogen, ekhokelela ekukhuleni okusisigxina kwemisipha.
Ukuba kuluhlu lwezona zinto zinamandla kakhulu steroids, I-Trenbolone Enanthate kufuneka ibe yenye ye-steroids oyithandayo. Ukuba ucwangcisa ukuqala ukuyisebenzisa, ayifanele ikukhathaze. Unokuthatha isigqibo sokuyibuyisela ekhaya okanye uthenge i-Trenbolone Enanthate kwi-Intanethi.
Indlela yokwenza i-testosterone enanthate homebrew kwiimpawu ze-6 I-DECA powder-Ultimate Guide Indlela yokwenza iNandrolone Decanoate (Durabolin)